Maxaa ka soo baxay shirkii shalay ee Golaha Wasiirada Puntland - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Maxaa ka soo baxay shirkii shalay ee Golaha Wasiirada Puntland
Golaha wasiirada Puntland ayaa shalay oo khamiis ah 19/Nov/2020 ayaa yeeshay shirka khamiislaha ee golaha kaas oo uu gudoominayey ku-simaha madaxweynaha Puntland, ahna madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Shirka ayaa todobaadkan looga hadlay Amniga, Xaaladda degmooyinka Puntland iyo xeerka dalxiiska ee Puntland. Ugu horeyn madaxweyne kuxigeenku wuxu uga tacsiyeeyey odayaasha dhaqanka, isimada iyo guud ahaan shacabka Puntland geeridii ku timid alle ha u naxariiste afhayeenkii isimada Puntland Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ku geeriyooday dalka Turkiga.
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Gen. Cabdi Yare oo ka qaybgalay shirka ayaa golaha wasiirada warbixin ka siiyey dadaalada lagu sugayo amniga Puntland iyo dardargelinta qorshayaasha ay wadaan. Wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa golaha la wadaagtay xaaladda degmooyinka Puntland gaar ahaan dhismaha golaha deegaanka ee degmada Iskushuban.
Sidoo kale wasaaradda Caafimaadka ayaa golaha uga warbixisay heerka uu marayo faafitaanka fayraska Corona iyo dadaalada ka hortagga ah ee ay wadaan. Ugu dambayn wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa golaha usoo bandhigtay hindise sharciyeedka dalxiiska kaas oo ay wasaaraddu soo diyaarisay kaas oo loo qaybiyey golaha wasiirada.
Previous article(Xog) Yaa ka danbeeyay xil ka qaadistii lagu sameeyay Axmed Ciise Cawad?
Next articleMadaxweynaha Faransiiska Amarro Cusub Ku Soo Rogay Muslimiinta Ku Nool